Taageerayaasha Real Madrid oo la ogaadey in ay ku heesayeen Magaca Ronaldo Kulankii Darbiga Madrid | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Taageerayaasha Real Madrid oo la ogaadey in ay ku heesayeen Magaca Ronaldo Kulankii Darbiga Madrid
(01-10-2018) Waxaa lasoo bandhigay sheeko Cusub oo ku aadan qaabkii Taageerayaasha Real Madrid u dhaqmayeen intii uu socotey Cayaartii darbiga Caasimada ee ay lacayaareen Naadiga ay Xafiiltamaan ee Atletico Madrid.
Taageerayaasha Real Madrid ayaa lacadeeyey in ay ku heesayeen magaca Ronaldo 90 kii daqiiqo ee uu socdey Kulankii bareejada ku dhamaaday ee ay lacayaareen Atletico Madrid iyaga oo muujinayey sida ay u tebayaan halyeygii Goolasha badnaa ee Cristiano Ronaldo.
Real Madrid Taageerayaasheeda ayaa cadeeyey in maqnaashaha Cristiano Ronaldo ay tahay Sababta hoos u dhaca looga dareemay kooxda iyaga oo sidoo kale Weerar ku qaaday Maamulka kooxda Waxayna ku canbaareeyeen in ay kooxda ka diraan halyeygii Hogaamiyaha ahaa ee Cristiano Ronaldo.
Kulankii darbiga ahaa dhex maray Real Madrid iyo Atletico Madrid ayaa ku dhamaaday bareejo 0-0 ah waxaana 15 Shuut oo ay sameeyeen Real Madrid lawaayey cid shabaqa Gaarsiisa.
Cristiano Ronaldo ayaa Real Madrid ka tegay 9 sano kadib markii uu la qaaday Koobab badan oo muhiim ah isla Markaana uu u dhaliyey Goolashii ugu badnaa isaga oo sidoo kale jabiyey Rikoor kasta oo Naadigaas yaaley.